भोलि माघ ६ गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! – NepalajaMedia
भोलि माघ ६ गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
सावधानीपूर्वक दिन बिताउनुहुनेछ । चिसो,कफ र ज्वरोको कारण स्वास्थ्य खराब हुनेछ। आफन्तसँग वियोग हुनेछ । धर्म गर्दा पैसा खर्च हुनेछ। मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ । धार्मिक र सामाजिक कार्यमा खर्च हुनेछ।
परिवारमा सुख-शान्ति बनिरहनेछ। कुटुम्ब र मित्रसँग आनन्द पल बिताउनुहुनेछ। आय र व्यापार-धन्दा वृद्धि हुनेछ । रमणीय स्थानमा घुम्न जानुहुनेछ। स्त्री वर्गको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। छोरा र श्रीमत्तीबाट आनन्ददायक समाचार मिल्नेछ। उत्तम दाम्पत्यजीवनको अनुभूति हुनेछ।
शारीरिक र मानसिक सुख बनिरहनेछ। पेसा-व्यवसायमा कार्यको प्रसंशा हुनेछ। व्यापारीद्वारा कामको कदर हुनेछ। जसले तपाईलाई अधिक प्रोत्साहित गर्नेछ। पदोन्नतिको योग रहेको छ। समाजमा मान- प्रतिष्ठा बढ्नेछ। सरकारी कार्यमा सफलता मिल्नेछ । गृहस्थ जीवन आनन्दपूर्ण रहनेछ।
तपाईको दिन धर्म ध्यान तथा देवदर्शनमा बित्नेछ। कुनै तीर्थ स्थानमा जाने प्रसंग बन्नेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले प्रफुल्लित रहनुहुनेछ। भाग्यवृद्धिक अवसर मिल्नेछ। परिवारको सदस्यसँग आनन्दपूर्वक समय बिताउनुहुनेछ। विदेश यात्राको लाही अनुकुल।
स्वास्थ्यको समबन्धमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बाहिर खानेपिउने नगर्नुहोला। बिरामीमा खर्च हुनेछ। नकारात्मक विचारले मन निराश रहनेछ। पारिवारिक सदस्यसँग सावधानीपूर्वक रहनुहोला। स्मरण र आध्यात्मिक विचार, अध्ययन चिन्ता कम गरेर सही मार्गमा जानुहुनेछ।
दिन अनुकूलताले परिपूर्ण रहनेछ। जीवनसाथीसँग निकटताको क्षणक आनन्द लिनुहुनेछ। दाम्पत्यजीवनमा मधुरता रहनेछ। विपरीत लिंगीय व्यक्ति तर्फ आकर्षण अनुभव गर्नुहुनेछ। सामाजिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा मान- प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ । उत्तम भोजन र वस्त्राभूषण तथा वाहनको प्राप्ति हुनेछ ।
घरमा शान्ती र आनन्दको वातावरण रहनेछ। सुखदायक घटना घट्नेछ। कार्यमा यश र सफलता मिल्नेछ। स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। पेसामा सिद्धि ऱ सफलता मिल्नेछ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहनेछ। सहकर्मी र अधीनस्थ नौकरवर्गको सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
स्वास्थ्यको सम्बन्धमा टिपोट रहनेछ। सन्तानको समस्याले तपाईलाई चिन्तित गर्नेछ। मानहानि होला। यात्रामा नजानुहोला। विद्यार्थीको पढाईमा सफलता मिल्नेछ। आर्थिक आयोजन सफलतापूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ।
तन-मनमा स्फूर्तिको अभाव रहनेछ। मनमा चिन्ता रहनेछ। पारिवारिक वातावरण कलुषित रहनेछ। आमासँग मनमुटाव हुनेछ । सार्वजनिक रूपमा स्वमानभंग नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। अनिन्द्र र समयमा भोजन नमिल्नाले स्वभाव चिडचिड़ापन रहनेछ।
दैनिक कार्यमा अनुकुल परिस्थिति निर्मित हुनेछ। गृहस्थजीवनको समस्या हाल भएको प्रतित हुनेछ। सम्पत्ति कामकाजको हाल मिल्नेछ। व्यापार-धन्दामा आर्थिक लाभ हुनेछ। विद्यार्थीको लागि शुभ समय रहेको छ। प्रिय व्यक्तिसँग भेट हुनेछ। प्रतिस्पर्धि समक्ष सफलता मिल्नेछ।
बोलीमा ध्यान दिनुहोला। वाद-विवादमा नपर्नुहोला। अनावश्यक खर्च हुनेछ। कार्यमा कम सफलता मिल्नेछ। सन्तोषको भावना अनुभव हुनेछ। स्वास्थ्य खराब हुनेछ। विद्यार्थीको विद्याप्राप्तिमा बाधा आउनेछ। आर्थिक हानि होला।
आनन्द र उत्साहले परिपूर्ण रहनुहुनेछ। घरमा कुनै मांगलिक प्रसंगको आयोजन हुनेछ। नयाँ कार्यको आरम्भ गर्नको लागि शुभ दिन रहेको छ। आफ़ाअन्तसँग भेट हुनेछ। तन-मनले प्रफुल्लित रहनुहुनेछ।
Nextविवाहको चटारोमा मुख्यमन्त्री, सांसद र कलाकार